Fantsom-pifandraisana PTFE, fantsona PTFE, fantsom-pifandraisana PTFE, fantsom-pifandraisana PTFE - Besteflon
PTFE fantsom-borosy malefaka
PTFE malefaka fantsom-borona dia misy kofehy PTFE mahitsy sy kofehy ivelany vy, habe: 1/8 '' hatramin'ny 1 1/8 ''.
Ny fantsom-pifandraisana PTFE dia fantsom-panafody mitafy mafy izay azo atao amin'ny fampiharana isan-karazany. Manome fahafaha-manao tsara, kink ary fanoherana ny fantsona.
Tube fantsom-pifandraisana PTFE
Ny fantsom-pifandraisana PTFE dia manome fananana simika sy elektrika tena tsara. Mandrindra manomboka amin'ny 1/8 "anaty savaivony hatramin'ny 4" savaivony anatiny.
Tube fantsona PTFE
PTFE fantsona manana fanoherana simika tena tsara, ny fitaovana dia an'ny thermoplastics ...
Ny fantsom-panafody PTFE dia ny tsy fitovizany mampino.
Fivorian'ny fantsom-pifandraisana PTFE
Ny fivorian'ny fantsom-pifandraisana PTFE dia misy amin'ny alàlan'ny kitapom-batsy sy ny integral. Afaka manome sy manamboatra karazana PTFE Hose Assembly sy Stainless Steel SS Braided Tube Assembly ...
FITONDRANA MAIMAIMPOANA, FANOHANANA NY TEMPERATURA MAORA
Besteflon mamatsy fantsom-by mirandrana PTFE amin'ny virijina sy manga
- kinova conductive black izay mety amin'ny indostria lehibe indrindra,
hydraulic sy karazana fampiharana.
Izahay koa dia manome solosaina malefaka PTFE ary koa fantsom-pifandraisana mifangaro / mihombo miaraka amin'ny tendrony misy flanged,
crimped fittings na mpampifandray raha takiana manokana. Kitiho eto
Indostria sy hery
Tube + Assemblies
Harley-Davidson ptfe hosotra
Hose ptfe mainty
Hose ptfe tsara indrindra
Huizhou Zhongxin Besteflon Industrial Co., Ltd. natsangana tamin'ny taona 2005, dia orinasa teknolojia avo lenta izay miasa amin'ny famokarana hosoka R&D PTFE sy ny varotra. Nanana fahaizana manokana izahayfantsona ptfe, ptfe fantsona, ptfe mifangaro volo, fantsom-panafody ptfe SY fivorian'ny fantsona ptfemandritra ny 15 taona. Manana andiana fitaovana famokarana sy rafitra fitiliana izahay. Ny vokatray miaraka amin'ny fampisehoana tsara sy ny vidin'ny fifaninanana dia amidy ao an-trano sy any ivelany.
Manana ekipa mpamolavola kalitao avo lenta izahay ary rafitra fiantohana kalitao feno. Fitaovana maro karazana toy ny detector pression, testerie gauge, tester insulateur, detector de mari-pana mba hiantohana ireo vokatra manana fahombiazana tsara sy kalitao tsara.
Kalitaon'ny vokatra Ilay vokatra mihitsy
Hihaona amin'ny fenitra SAE 100R14, ny akora hafarana ampiasain'ny fitaovana Dajin, ny akora anatiny mampiasa Sichuan Chenguang
1. Ny fantsom-by mirandrana vy dia hohafanaina ary hojeren'ny fitsapana hydraulic
2. Ny metatra isaky ny fantsona miboridana dia hosedraina amin'ny fihenan'ny rivotra
3. Ny tariby vy dia vita amin'ny tariby vy 316/304 miaraka amin'ny atiny nikela iraisam-pirenena ≥80%. Mampiasà tariby vy Xiamen Donglai
Insulation, Tsy miraikitra
1. Ny fiainam-panompoana mahazatra dia mety hahatratra 50 taona na mahery
2. Fiadiana amin'ny harafesina sy simika, tsy misy fihetsika amin'ny simika sy ny solvents rehetra
Inona no hosoka solika tsara indrindra？
Inona no atao hoe Stainless Steel Braided PTFE Tube？
fantsona mifono ptfe, Ptfe Tube E85, Tolom-panafihana Ptfe Tube - 939 / 939b, fantsona ptfe, 6an Ptfe Tube Assembly, pose fehiloha ptfe,